NASA yakapomera China kukundikana kuita zvine mutsindo mushure mekunge Rocket yarova padhuze neMaldives
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » NASA yakapomera China kukundikana kuita zvine mutsindo mushure mekunge Rocket yarova padhuze neMaldives
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • China Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Maldives Kuputsa Nhau • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Vanhu kubva kuNew Zealand kuenda kuNew York, kubva kuTokyo kuenda kuRio vanga vari pamucheto nhasi vachitsvaga mudenga kutsvaga roketi risingadzoreke, vachitarisira kuti raizovaponesa.
Tsvina kubva kudombo hombe reChinese iro raidonha pasi pasi nenzira isingadzoreke inonzi yapunzika muIndian Ocean padhuze neMaldives mangwanani ano.
NASA Administrator Sen. Bill Nelson akaburitsa chirevo nemugovera nezve marara kubva kuChina Yakareba Kurume 5 Rocket:
Roketi rakabvisa mazuva gumi apfuura rikave risingadzoreki
Mabhiriyoni evanhu munyika vakaona kunze kweControl rocket ichivarova kubva muchadenga. Mushure meiyi rocket yakarova muIndian Ocean padhuze neMaldives, pasina kuuraya chero munhu.
NASA yakati: "Nyika dzinotenga nzvimbo dzinofanira kudzikisira njodzi kuvanhu nepfuma paPasi yezvinhu zvakare zvinowanika muchadenga uye kuwedzera pachena pamusoro peaya mashandiro.
"Zviri pachena kuti China iri kutadza kuzadzisa zviga zvine chekuita nezve marara epasi.
"Zvakakosha kuti China nenyika dzese dzinotenga nzvimbo uye masangano ezvokutengeserana aite zvine mutsindo uye pachena muchadenga kuti ave nechokwadi chekuchengeteka, kugadzikana, nekuchengetedzwa kwenguva refu kwezviitiko zvekunze."